Tag: fizarana bokotra | Martech Zone
Tag: fizarana bokotra
Votoatin'ny votoatin'ny viriosy 5
Asabotsy Jolay 6, 2013 Alahady, Jolay 7, 2013 Douglas Karr
Ireo olona tsara ao amin'ny Social Media Explorer dia nandefa infographic, singa fototra 5 misy atiny virosy, avy amin'ny Intersection Consulting. Izaho manokana dia tsy tiako ilay teny hoe viral amin'ity infographic ity… Tiako ny teny azo zaraina. Imbetsaka ianao dia afaka mihoatra ny antenaina amin'ny singa fototra tsirairay ao anatin'ity infographic ity - saingy tsy midika izany hoe lasa virtoaly izy io. Leo Widrich ao amin'ny Buffer Blog dia nanoratra lahatsoratra lehibe momba ny antony mampiely ny atiny. Ao anatiny,
Alakamisy, Desambra 24, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny enim-bolana lasa teo dia nisedra olana satria natomboko ny orinasako. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny fikorianam-bola… fantatrao haingana fa na dia miasa mafy ianao dia tsy voatery hidina ao am-baravarana ny vola. Vokatr'izany dia mihazakazaka mahia aho. Tsy mbola niantsena tany amin'ny biraon'ny birao akory aho tamin'io fotoana io. Nihevitra aho fa hizara fanaparitahana ireo fitaovako amin'ny varotra. Tsy manana zavatra manokana aho ary tena miasa